Xildhibaan Saqar oo ku geeriyooday weerarka Wasaaradaha Shaqada iyo Howlaha Guud – Kalfadhi
Xildhibaan Saqar oo ku geeriyooday weerarka Wasaaradaha Shaqada iyo Howlaha Guud
Xildhibaan Saqar Ibraahin Cabdalla, oo ahaa Wasiir Kuxigeenka Wasaaradda Shaqada iyo Shaqaalaha, ayaa la sheegay inuu ku dhintay weerarka maanta lagu qaaday Xarunta Wasaaradaha Shaqada iyo Halwlaha Guud iyo Guriyeynta Soomaaliya ee magaalada Muqdisho.
Wasaaradaha la weeraray ayaa marka hore waxaa lagu dhuftay gaari qaraxa, kadibna waxaa la sheegay in ay rag hubeysan gudaha u galeen, balse lama oga in dhimashada xildhibaanka ay dhacday markii uu qaraxu dhacay iyo in gudaha wasaaradda lagu dhex toogtay.
Xildhibaan Lutfi Shariif Maxamed ayaa bartiisa Feysbuugga ku soo qoray “Allaha u naxariisto Wasiir Xildhibaan Saqar Ibraahin Cabdalla”, waxaana sidoo kale jira baro kale, oo ay ka mid yihiin warbaahinta maxaliga ah, oo baahiyey inuu Xildhibaanku ku geeriyooday weerarka wasaaraddiisa.
Tirada dadka ku dhintay, kuna dhaawacmay, weerarkaas qaraxa ku bilowday ayaa la sheegayaa iney hadba kordheyso, laakiin wali dowladda iyo laamaha caafimaadka iyo gurmadka degdegga ma cadeyn lambarka saxda ah ee dhimasho ama dhaawac ee ka dhashay weerarkaas, balse waxaa la xaqiijiyey in ay waxyeeladu ku badan tahay shaqaalaha wasaaradaha la weeraray iyo dad shacab ahaa oo agagaarka goobta joogay.
Xildhibaan ka digaya in ay halis gaari doonto haddii aan laga hortagin biyo yari ka jirta Hiiraan